3D printer qaybo spare iyo dayactirka | qalab bilaash ah
Qaybaha firaaqada iyo dayactirka daabacaha 3D
Isaac | 29/03/2022 09:00 | Daabacaadda 3D
Madbacadaha 3D waxay leeyihiin dhibaatooyin iyo burbur sida qalab kasta oo kale, markaa waa inaad ogaataa sida loo sameeyo dayactirka saxda ah si dib loogu dhigo muuqaalka dhibaatooyinka, iyo sidoo kale ogaanshaha suurtogalka ah xalalka burburka iyo qaybo ka mid ah madbacadaha 3D in aad gacantaada ku hayso si aad u bedesho curiyaha dhaawacan marka loo baahdo. Dhammaan waxa aad ku baran doonto hagahan qeexan.
*Ogaysiis MUHIIM AH: Kuwa badan baa jira noocyada daabacadaha 3D, marka waxaa laga yaabaa in ay jiraan farqi yar oo u dhexeeya marka la baarayo iyo hagaajinta. Sidoo kale, daabacadaha qaarkood waxay noqon karaan kuwo adag, sida kuwa warshadaha. Sidaa darteed, marka aadan aqoon sida loo dhaqmo, waxaa fiican inaad tixraacdo buug-gacmeedka nooca qalabkaaga gaarka ah ama adeegga farsamada ee astaanta daabacaada. Hagahan waxa uu si gaar ah ugu wajahan yahay daabacayaasha guriga.
Bresser - Murti af Eeg astaamaha Eeg bixinta
Iverntech V5 Extrusor... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Waxaan jecel nahay
HENTEK extruder hotend... Eeg astaamaha Eeg bixinta
bisophice anet 2pcs/set... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Bresser - Murti af
Tayada qiimaha	Iverntech V5 Extrusor...
Waxaan jecel nahay	HENTEK extruder hotend...
1 Qaybaha firaaqada ugu fiican ee daabacayaasha 3D
1.1 Xirmooyinka / Saxanka Qaadista
1.3 Xaashida PEI si loo hagaajiyo ku dheggan iyo ka saarista qayb
1.5 saxan saldhig daabac
1.6 Jinka kulul
1.7 Extruder ama hotend
1.9 tuubada PTFE
1.10 isku xiraha sambabada
1.11 Korontada daabacaha 3D
1.13 Suunka ilkaha
1.15 xanbaarsanaan ama xambaarid
1.16 Kala -baxa kuleylka
1.18 xaashida FEP
1.21 Shaashadda LCD
1.22 Laydhka gaadhista UV
1.23 Haanta xabagta
1.24 Qalab dheeraad ah iyo qalab
1.24.1 Xiritaanka Xirmooyinka Gooyaha Nozzle-ka
1.24.2 Qalabka soo saarista iyo nadiifinta
1.24.3 Xirmooyinka funnels iyo filtarrada xabagta
1.24.4 Kaydinta fiilada qalalan oo badbaado leh
2 Dayactirka daabacayaasha 3D
2.1 Heerarka ama Qalabaynta sariirta
2.3 Ku dheggan si fiican u ilaali
2.4 Dib-u-habaynta suunka wakhtiga
2.6 Nadiifinta sanka
2.7 Dayactirka suufka
2.8 Beddelka sanka
2.9 nadiifinta sariirta
2.10 Nadiifinta dibadda (guud)
2.11 nadiifinta gudaha
2.12 nadiifi xabagta
2.13 Cusbooneysii qalabka daabacaha 3D
3 Hagaha ogaanshaha iyo hagaajinta dhibaatooyinka daabacadaha 3D ee caadiga ah
3.1 Waa maxay sababta daabacaadda 3D-ga aanu u daabicin?
3.2 Neefku wuxuu u jiraa masaafo aan habboonayn sariirta
3.3 Xuub qaniinay ama qaybo maqan
3.4 Madbacaddu waxay ka tagtaa qaybta daabacan ee dhexda
3.5 Faahfaahin yar lama daabaco
3.6 adhesion liidata ee qaybta
3.7 Godadka aan la buuxin ee lakabka u dambeeya
3.8 Meel bannaan oo aan la buuxin ee lakabyada ama qaybaha dhuuban ee qaybta
3.9 Matoorka soo saara ayaa aad u kululaaday
3.10 Warping ama qallafsanaan: sababaha iyo xalalka
3.11 Dayactirka 3D daabacaha oo leh xadhig ama jajab
3.12 Neefka ayaa xidhan
3.13 Kala guurista lakabka ama guuritaanka lakabka
3.15 Caag xad-dhaaf ah oo qaab dhibic ah
3.16 nabarrada dusha ka saaran
3.17 hoos extrusion
3.18 xad-dhaaf ah
3.19 Nozzle ka horrayn
3.21 Kuleyl ka badan qaybaha daabacan
3.22 Delamination ee daaweynta resin
3.23 Daabacaadda faakuumka daabacaha resinka
3.24 sifada aan la horumarin
3.25 Godad ama goyn
3.26 Dildilaaca ayaa ka muuqda lakabka koowaad
3.28 qallafsanaan ama finan
3.29 Cadaadiska xad dhaafka ah
3.30 La'aanta adhesion ee daabacaadda 3D xabagta
3.31 Silhouettes ku yaal saldhigga daabacaadda ( daabacaha 3D xabagta)
3.32 Qalabkii simida ayaa gaadhay xadkiisii
3.33 Turjumaan koodka qaladka daabacaha 3D
4 Macluumaad dheeraad ah
Qaybaha firaaqada ugu fiican ee daabacayaasha 3D
Waa kuwan qaar talooyinka qaybo ka mid ah madbacadaha 3D si ay kuu hanuuniyaan, in kasta oo aanay dhamaantood la socon nooc kasta oo daabacaha 3D:
Xirmooyinka / Saxanka Qaadista
Qalabka casriga ah ee Zeberoxyz... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Xirmooyinka cusboonaysiinta ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Taageerada saxan, saxan... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Warka Befenybay... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Qalabka casriga ah ee Zeberoxyz...
Tayada qiimaha	Xirmooyinka cusboonaysiinta ee...
Waxaan jecel nahay	Taageerada saxan, saxan...
Sovol Creality Ender 3... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Fikradda Sariirta Birlabka ah ee hore... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Creality Ender 3 Sariir... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Fikradii hore PEI 220x220... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Sovol Creality Ender 3...
Tayada qiimaha	Fikradda Sariirta Birlabka ah ee hore...
Waxaan jecel nahay	Creality Ender 3 Sariir...
Fikradii hore PEI 220x220...
Xaashida PEI si loo hagaajiyo ku dheggan iyo ka saarista qayb
PEI Sheet 235x235mm, sariir... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Nidaamka Toaiot... Eeg astaamaha Eeg bixinta
HICTOP Platform... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	PEI Sheet 235x235mm, sariir...
Tayada qiimaha	Fikradii hore PEI 220x220...
Waxaan jecel nahay	Nidaamka Toaiot...
3Dman Heatbed Silicone... Eeg astaamaha Eeg bixinta
YIXSI 4pcs Springs... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Qaybaha sariirta... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Tiirka Furiga ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	3Dman Heatbed Silicone...
Tayada qiimaha	YIXSI 4pcs Springs...
Waxaan jecel nahay	Qaybaha sariirta...
Tiirka Furiga ee...
saxan saldhig daabac
BIGTREETECH SKR 3 saxan... Eeg astaamaha Eeg bixinta
BIGTREETECH Octopus V1.1... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Guddiga Xakamaynta MKS... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Halabuurka rasmiga ah ee Ender 3... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	BIGTREETECH SKR 3 saxan...
Tayada qiimaha	BIGTREETECH Octopus V1.1...
Waxaan jecel nahay	Guddiga Xakamaynta MKS...
Halabuurka rasmiga ah ee Ender 3...
Mid ka mid ah wuxuu ku raaxaysan kuleyl ku dhejinta Eeg astaamaha Eeg bixinta
Lacagta Qiu... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Easycargo Thermal koollada,... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ciyaarta Mars MT1, Baasto... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Mid ka mid ah wuxuu ku raaxaysan kuleyl ku dhejinta
Tayada qiimaha	Lacagta Qiu...
Waxaan jecel nahay	Easycargo Thermal koollada,...
Ciyaarta Mars MT1, Baasto...
Extruder ama hotend
Hababka Hogaamiye ee JHead V6, Qalabka... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Xirmada madaxa ee ka soo baxda... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Qalabka madaxa ee LICHIFIT ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
HUSZZM E3D V6 Kit J-Madax... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Hababka Hogaamiye ee JHead V6, Qalabka...
Tayada qiimaha	Xirmada madaxa ee ka soo baxda...
Waxaan jecel nahay	Qalabka madaxa ee LICHIFIT ee...
HUSZZM E3D V6 Kit J-Madax...
Duubka daabacaha 3D... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Qalabka Korontada ee SIENOC... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Haisheng 5PCS Nozzles Eeg astaamaha Eeg bixinta
Soosaariyaha Nozzle MK8... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Duubka daabacaha 3D...
Tayada qiimaha	Qalabka Korontada ee SIENOC...
Waxaan jecel nahay	Haisheng 5PCS Nozzles
Soosaariyaha Nozzle MK8...
1 m longitud 2 mm ID... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SIENOC 2x 1M PTFE Teflon Eeg astaamaha Eeg bixinta
Capricorn Bowden Tube... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SIQUK 5 qaybood oo caag ah... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	1 m longitud 2 mm ID...
Tayada qiimaha	SIENOC 2x 1M PTFE Teflon
Waxaan jecel nahay	Capricorn Bowden Tube...
SIQUK 5 qaybood oo caag ah...
isku xiraha sambabada
Xiriiriyaha Wendry... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SCARF 3Pcs Xirfadle... Eeg astaamaha Eeg bixinta
YOTINO 10 Qaybood PC4-M6... Eeg astaamaha Eeg bixinta
UniTak3D 8Pcs PC4-M10... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Xiriiriyaha Wendry...
Tayada qiimaha	SCARF 3Pcs Xirfadle...
Waxaan jecel nahay	YOTINO 10 Qaybood PC4-M6...
Korontada daabacaha 3D
Quimat 2pcs MOSFET... Eeg astaamaha Eeg bixinta
ZHITING Mini Module... Eeg astaamaha Eeg bixinta
DoollaTek Module... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Module ARCELI... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Quimat 2pcs MOSFET...
Tayada qiimaha	ZHITING Mini Module...
Waxaan jecel nahay	DoollaTek Module...
Matoorka Stepper ee Creality... Eeg astaamaha Eeg bixinta
AZDelivery CNC Shield V3... Eeg astaamaha Eeg bixinta
TECNOIOT 5pcs Reprap... Eeg astaamaha Eeg bixinta
6 unids 1.5M/5ft motor... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Matoorka Stepper ee Creality...
Tayada qiimaha	AZDelivery CNC Shield V3...
Waxaan jecel nahay	TECNOIOT 5pcs Reprap...
DoollaTek 5 Mitir 6 mm... Eeg astaamaha Eeg bixinta
QWORK 5Pcs Correas... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SCARF® 10pcs Premium... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SPTwj 5 mitir 3D... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	DoollaTek 5 Mitir 6 mm...
Tayada qiimaha	QWORK 5Pcs Correas...
Waxaan jecel nahay	SCARF® 10pcs Premium...
SPTwj 5 mitir 3D...
Jilitaanka suunka... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Fafeicy 20/60 Ilkaha... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Dadabig 8Pcs 3D Printer... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Jilitaanka suunka...
Tayada qiimaha	Jilitaanka suunka...
Waxaan jecel nahay	Fafeicy 20/60 Ilkaha...
xanbaarsanaan ama xambaarid
20 x xamaasad leh... Eeg astaamaha Eeg bixinta
3D FREUNDE Original Igus... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Jeexitaanka Pulley ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ruesious 608ZZ -... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	20 x xamaasad leh...
Tayada qiimaha	3D FREUNDE Original Igus...
Waxaan jecel nahay	Jeexitaanka Pulley ee...
Kala -baxa kuleylka
Vipxyc Heat Heat... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Easycargo 4pcs... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Jopto 4 Accesorios de... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Jopto 4 qalabyada... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Vipxyc Heat Heat...
Tayada qiimaha	Easycargo 4pcs...
Waxaan jecel nahay	Jopto 4 Accesorios de...
Jopto 4 qalabyada...
RUNCCI-YUN 3 qaybood... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Taageere qaboojinta 4pcs... Eeg astaamaha Eeg bixinta
HAWKUNG 2 Piece Printer... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Bigxin 4pcs taageere... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	RUNCCI-YUN 3 qaybood...
Tayada qiimaha	Taageere qaboojinta 4pcs...
Waxaan jecel nahay	HAWKUNG 2 Piece Printer...
Bigxin 4pcs taageere...
Filimada kala soocida... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Filimka FEP ee ugu... Eeg astaamaha Eeg bixinta
5 Qaybood Filimka FEP... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Filimka ELEGOO 5PCS FEP... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Filimada kala soocida...
Tayada qiimaha	Filimka FEP ee ugu...
Waxaan jecel nahay	5 Qaybood Filimka FEP...
Filimka ELEGOO 5PCS FEP...
Saliidaha Furiga... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Bisofice 2 Pieces Super... Eeg astaamaha Eeg bixinta
3 HAL xirfadle -... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Qalabka Furiga ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Saliidaha Furiga...
Tayada qiimaha	Bisofice 2 Pieces Super...
Waxaan jecel nahay	3 HAL xirfadle -...
Qalabka Furiga ee...
ARCELI ARTCI Heerarka kuleyliyaha... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SOOWAY 6 Qaybood 6 x 20... Eeg astaamaha Eeg bixinta
HICTOP Sensor/ Heerkul... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Dareemaha heerkulka matoorka... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	ARCELI ARTCI Heerarka kuleyliyaha...
Tayada qiimaha	SOOWAY 6 Qaybood 6 x 20...
Waxaan jecel nahay	HICTOP Sensor/ Heerkul...
Dareemaha heerkulka matoorka...
5,5" LCD shaashad ah oo loogu talagalay ... Eeg astaamaha Eeg bixinta
KOYOFEI 5PCS Protector... Eeg astaamaha Eeg bixinta
ELEGOO LCD monochrome ah... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Qaybaha Bisofice ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	5,5" LCD shaashad ah oo loogu talagalay ...
Tayada qiimaha	KOYOFEI 5PCS Protector...
Waxaan jecel nahay	ELEGOO LCD monochrome ah...
Qaybaha Bisofice ee...
Laydhka gaadhista UV
DASNTERED 16 Midab LED... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Hal-abuurka Halot One... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SouiWuzi Light Board... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Guddiga Iftiinka Obelunrp... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	DASNTERED 16 Midab LED...
Tayada qiimaha	Hal-abuurka Halot One...
Waxaan jecel nahay	SouiWuzi Light Board...
Guddiga Iftiinka Obelunrp...
Haanta Xabagta Hal-abuurka ah... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Taangiga xabagta ee Frame... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Okuyonic Resin Slot... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Haanta resin Okuyonic... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Haanta Xabagta Hal-abuurka ah...
Tayada qiimaha	Taangiga xabagta ee Frame...
Waxaan jecel nahay	Okuyonic Resin Slot...
Haanta resin Okuyonic...
Qalab dheeraad ah iyo qalab
Xiritaanka Xirmooyinka Gooyaha Nozzle-ka
Talooyin kharriban ee godka extrusion, baabi'inta caqabadaha ama xinjirowga suurtogalka ah ee fiilada adag ee laga yaabo inay xannibaan bixidda.
Qalabka Qufulka Korontada ee Voarge... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Sunreek - Diyaarinta talooyinka... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Irbadda Vbestlife... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Qalabka Korontada ee SIENOC...
Tayada qiimaha	Qalabka Qufulka Korontada ee Voarge...
Waxaan jecel nahay	Sunreek - Diyaarinta talooyinka...
Qalabka soo saarista iyo nadiifinta
Diyaarso qalab kaa caawin doona hawlaha nadiifinta, ka saarista qaybaha, iyo hagaajinta ee daabacaada 3D
Qalabka daabacaha ee 42PCS... Eeg astaamaha Eeg bixinta
SOOWAY 36pcs Kit... Eeg astaamaha Eeg bixinta
OLYCRAFT 23PCS 3D... Eeg astaamaha Eeg bixinta
HAWKUNG 35 Xabbo oo ah Xirmada... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Qalabka daabacaha ee 42PCS...
Tayada qiimaha	SOOWAY 36pcs Kit...
Waxaan jecel nahay	OLYCRAFT 23PCS 3D...
HAWKUNG 35 Xabbo oo ah Xirmada...
Xirmooyinka funnels iyo filtarrada xabagta
Xirmada funnels iyo filtarrada si ay u shubaan xabagta oo ka saar walxaha adag. Waxay labadiinaba kaa caawin doonaan inaad geliso kaydka daabacaadda iyo inaad ku celiso doonta haddii aad rabto inaad haysato.
JOREST 7 qaybood oo daabacaad... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Sovol 3d Resin Printer... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Xabagta daabacaha 3D Eeg astaamaha Eeg bixinta
ManLee 102pcs shaandhaynta biyaha Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	JOREST 7 qaybood oo daabacaad...
Tayada qiimaha	Sovol 3d Resin Printer...
Waxaan jecel nahay	Xabagta daabacaha 3D
ManLee 102pcs shaandhaynta biyaha
Kaydinta fiilada qalalan oo badbaado leh
Waxaad ka heli kartaa bacaha faakuumka si aad u kaydiso fiilooyinka iyada oo aan qoyaan ama boodh lahayn marka aad haysato dhawr xabbo iyo ma isticmaali doontid wakhti dheer. Xaga xabagta, habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo waa dherigiisa.
eSUN Vacuum Kit, 10... Eeg astaamaha Eeg bixinta
eSUN 15 Qaybaha daabacaha... Eeg astaamaha Eeg bixinta
HAWKUNG 10 Qaybood 3D... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	eSUN Vacuum Kit, 10...
Tayada qiimaha	eSUN Vacuum Kit, 10...
Waxaan jecel nahay	eSUN 15 Qaybaha daabacaha...
HAWKUNG 10 Qaybood 3D...
Dhinaca kale, qoyaanku wuxuu saameyn karaa fiilooyinka daabacaadda 3D. Tani waa sababta sanduuqyada qalajinta loo iibiyo kuwaas oo soo celin doona "caafimaadka" wanaagsan ee fiilooyinkaaga, sidaas darteed badbaadinta fiilada qoyan.
eSUN eBox Lite Box... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Sanduuqa Qalajiyaha ee Sovol Tumble... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Sanduuqa qalajiyaha ee... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	eSUN eBox Lite Box...
Tayada qiimaha	Sanduuqa Qalajiyaha ee Sovol Tumble...
Waxaan jecel nahay	Sanduuqa qalajiyaha ee...
Sanduuqa qalajiyaha ee...
Dayactirka daabacayaasha 3D
Calibration. Qore: Stemfie3D
Calibration. Qore: paulo@kiefe.com
Saliid. Qore: paulo@kiefe.com
Qayb fashilantay sababtoo ah habayn iyo habayn xumo
Ka-hortagga ayaa had iyo jeer ka fiican dayactirka. Taasi waa sababta ay aad muhiim ugu tahay dayactirka wanaagsan ee qalabka daabacaadda 3D. Haddii si habboon loo dayactiro, jajabinta qaybaha iyo xumaantooda ayaa dib loo dhigi karaa, marka lagu daro ka hortagga dhibaatooyinka qaarkood. Marka la soo koobo, dadaalka lagu ilaalinayo daabacaha 3D wuxuu u tarjumi doonaa wax soo saar weyn, iyo kayd dhaqaale mustaqbalka fog.
* MUHIIMFiiro gaar ah: Had iyo jeer akhri buug-gacmeedka la socda daabacaha 3D si loo maareeyo habboon iyo dayactirka. Haddii aadan haysan buug-gacmeedkan, kala soo bax nooca PDF bogga rasmiga ah ee soo saaraha moodelkaaga. Waa inaad qabataa hawlaha ugu badan iyadoo daabacaha 3D uu dansan yahay oo la furayo si aad uga fogaato koronto-dhaliyaha, iyo xaaladaha aysan taasi suurtogal ahayn, sida marka dab-demiska la kululeeyo, aad uga taxaddar inaadan is gubin.
Heerarka ama Qalabaynta sariirta
Sariirta si fiican u ilaali waa mudnaan. Waa in la sameeyaa xilliyo. Qaar ka mid ah daabacayaasha 3D waxaa ku jira si toos ah ama semi-otomaatig ah (oo ka yimid liiska kantaroolka daabacaha laftiisa), markaa waxaad iska ilaalin doontaa inaad gacanta ku sameyso. Laakiin xaaladaha aan lagu darin, waa inaad gacanta ku hagaajisaa si aad uga fogaato hoos u dhaca, jaakadaha aan sinnayn, ama ku dhegsiga liidata.
Waxaa muhiim ah in ka hor inta aadan simin aad hubiso in sariirta dusheeda ay aad nadiif u tahay, mar kasta oo aad awooddo waxaa fiican inaad sameyso heerkul kulul. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa heerkulka daabacaadda waxaadna ka ilaalin doontaa inay si khaldan u wajahdo ballaarinta alaabta. In kasta oo, guud ahaan, aanad dareemi doonin farqi badan oo u dhexeeya cabbirka qabowga ama kulul.
Wixii ah habaynta gacanta Waa inaad isticmaashaa taayirrada ama furayaasha hagaajinta ee daabacayaashu inta badan ku leeyihiin saldhigga. Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in loo wareejiyo hal dhinac ama dhinaca kale si kor loogu qaado ama loo yareeyo geesaha oo ay uga baxaan heerka. Ogsoonow inaad tixraacdo 5 dhibcood, afarta gees iyo xarunta. Oo haddii, tusaale ahaan, lakabyada waa 0.2 mm, masaafada u dhaxaysa sanbabada extruder iyo sariirta dhammaan dhibcood waa in ay ahaataa inta u dhaxaysa 0.1 iyo 0.2 mm.
Isticmaalayaasha qaarkood ayaa isticmaala xeelad si loo simeeyo, waana in la dhejiyo daabacaha si uu u daabaco shay oo hoos u dhigo xawaaraha ugu sarreeya marka la daabacayo lakabka koowaad. Iyo inta lagu jiro habka, waxay eegaan dhumucda aan sinnayn ee lakabka waxayna si toos ah sariirta gacanta ugu siman yihiin ilaa ay ka siman tahay.
Xusuusnow inaad sariirta simayso ugu yaraan hal mar Qalab casriyeyn ka dib, bilowga hore, marka la isticmaalayo alaabada yaraynta sare sida naylon ama polycarbonate, ama marka la rakibo xaashida PEI.
Tan waxa kale oo lagu samayn karaa iyadoo la isticmaalayo qaar ka mid ah hawlaha daabacaha laftiisa si fudud, ama gacanta. Mararka qaarkood is-habaynta xun maaha arrin la hagaajinayo, laakiin waa faasas XYZ Dhibaatooyin ama xirasho, si ay u baahdaan beddelka. Si aad u hubiso jaangooyada, waad awoodaa soo deji cube calibration ah oo daabac si aad u aragto natiijada.
Ku dheggan si fiican u ilaali
La lakabka koowaad waxay saameeyaan inta kale ee qaybta daabacan. Intaa waxaa dheer, haddii aysan jirin adhesion wanaagsan, waa la go'i karaa ama la dhaqaajin karaa inta lagu jiro daabacaadda, taasoo keenta deformations (gaar ahaan qalabka sida ABS). Sidaa darteed, dusha sare waa inuu ahaadaa mid nadiif ah intii suurtogal ah:
delete boodhka, saliidaha dabiiciga ah ee ka soo baxa maqaarkayaga markaan taabano sariirta, iyo wasakh urursan oo leh maro microfiber ama suuf ah. Waxaad u isticmaali kartaa nadiifinta khamriga sida IPA sariiraha ka samaysan dhalooyinka.
Hadaad isticmaasho dhejisyo ama cajalado Si loo hagaajiyo ku dheggan sariirta, waxaa jiri kara hadhaa xabag ah oo ay tahay in aad iska xoqdo oo aad ku dhaqdo saabuun iyo biyo saxanka dhexdeeda (ka saara sariirta daabacaha 3D). Sidoo kale, waa inaad beddeshaa xabagta haddii ay jiraan wax cillado ah oo saameyn kara lakabka koowaad.
Dib-u-habaynta suunka wakhtiga
Qaar badan oo madbacadaha 3D guriga ah ayaa isticmaala suun waqtiyeed ugu yaraan 2 faas. Xargahani waa kuwo fudud waxayna u oggolaanayaan dhaqdhaqaaq hufan. Si kastaba ha ahaatee, si dhaqdhaqaaqani u noqdo mid wanaagsan waxay u baahan yihiin inay xoojiyaan mar mar si looga fogaado dhibaatooyinka:
dabacsan: Marka ay aad u dabacsan tahay way xumaan kartaa oo way xidhi kartaa ilkaha, sidoo kale kama jawaabi doonto sida ugu dhakhsaha badan isbeddelada degdega ah ee xawaaraha iyo jihada, taas oo saameynaysa tayada qaybta.
Danab sare: Waxay sababi doontaa inay jabto (in kasta oo qaar badan oo ka samaysan caag lagu xoojiyay fiberglass ama bir) ama ay ku qasbaan qaybo kale, sida biraha ama jiidaha, marka lagu daro inay xoog badan ku qasbaan matoorada. Tani waxay sidoo kale u horseedi kartaa cilladaha lakabka, cabbir aan sax ahayn, iwm.
Si aad iyaga si sax ah u xoojiso, raac buug-gacmeedka noocaaga gaarka ah. Caadi ahaan waxay leeyihiin suunka xayndaabka kaas oo aad u fudud in la isticmaalo. kaliya waa inaad xidhi furka Si tan loo sameeyo, adigoo mid ka mid ah ku haysta suunka kasta oo aad haysato.
Aad bay muhiim u tahay ha isticmaalin alaabta sida 3 in 1, nooca WD-40 iyo wixii la mid ah, maadaama aysan tani si sax ah u saliidayn daabacaada, laakiin waxay sidoo kale ka saari kartaa wax kasta oo saliid ah oo hadhsan.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo dufan iyo saliid, Hubi in ay tahay mid ay ku taliyeen soo saaraha daabacaada 3D, maadaama ay jiri karaan qaar ka fiican kuwa kale. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waxay u muuqdaan inay isticmaalaan dufan lithium cad, saliidaha qalalan sida qaar ku salaysan silicone ama Teflon, iwm.
Habka saliidaynta ama saliidda waa inay noqotaa codso qaybaha dhaqaaqa ee u baahan, sidaas darteed ka fogaanshaha kulaylka badan ee matoorada sababtoo ah is jiid jiid, cilladaha dusha sare ee daabacaadda, ama buuqa:
Ulaha leh biraha ama biraha toosan
biraha ama biraha
Haddii aad wakhti dheer qaadatay adigoon saliidayn qaybihiisa, waxay u badan tahay inaad bedesho qaybo ka mid ah sababtoo ah ma ahaan doonaan xaalad qumman.
Waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan, inkastoo ay taasi jirto, inta badan waa la dayacay ilaa ay noqoto mid xiran. Dhuunta-saaruhu waa inuu sidoo kale ahaadaa nadiifi ka hor inta aanad bilaabin daabacaadda. Tani waxay meesha ka saari doontaa hadhaagii fiilooyinka adag ee ku dheggan oo saamayn kara daabacaadda mustaqbalka. Tan waxaad isticmaali kartaa xirmada nadiifinta sanka ama nadiifinta fiilooyinka.
Ka digtoonow marka aad isticmaalayso burushka birta ah iyo maacuunta kale, maadaama taabashada qaybo awood leh oo ka mid ah daabacaadda 3D ay gaabin kartaa wareegga waxayna dhaawacaysaa Motherboard-ka.
Qaarkood talooyinka Waxay yihiin:
Waxa kale oo laga yaabaa inaad taas dareentay qaar ka mid ah daabacayaasha 3D filament "dool" wax yar ka hor inta aanad bilaabin daabacaadda. Taasi waa, waxay soo daadiyaan dunta fiilo dhalaalaysa oo ay tahay inaad ka saartid goobta ka hor intaanay dheggin oo gooyn kara lakabka ugu horreeya ee qaybta la daabacayo.
ka wasakh dibadda ah sidoo kale waa muhiim. Ma aha arrin bilicsan, waa in laga hortago in sanbabadadu xumaato ama qolka in laga hortago inuu uriyo caag gubtay. Nadiifinta saxda ah, kuleyl dabaylaha ka dibna waa inaad ku cadaydaa burush bir ah oo ka soo baxay qalabka nadiifinta. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa caawinta tweezers ama maro qaro weyn, ka taxaddar inaadan is gubin.
Sidoo kale nadiifi xannibaadda kuleyliyaha.
Haddii aad ka shakisan tahay inuu jiro xannibid, waa inaad samaysaa soosaar qabow, haddii aad awooddo. Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa fiilo heerkul sare leh sida ABS ama PETG si aad isku daydo inaad furto, ama fiilooyinka nadiifinta gaarka ah ee ka jira suuqa. Si looga fogaado arrimahan macaanka, had iyo jeer xasuuso inaad dejiso heerkulka fiyuuska habboon ee alaabta la isticmaalayo.
Waad ku mahadsan tahay dayactirkan waxaad awoodi doontaa inaad iska ilaaliso qulqulka fiilooyinka, miraha dusha sare ee qaybaha daabacan, xannibaadda, suppuration, iyo sidoo kale dhibaatooyinka sida extrusion ama xad-dhaaf ah.
Fillaha waa in sidoo kale si wanaagsan loo ilaaliyaa, ama halkii, waa inay ahaataa si fiican loo ilaaliyay. Qoyaanka iyo siigada ayaa ah labada arrimood ee inta badan saameeya fiilada. Kaydinta fiilada oo liidata waxay u horseedi kartaa xidhmo sanbabada ah, suppuration, kororka qulqulka tuubooyinka ay dhex maraan fiilada, iyo burburka qoyaanka dartiis.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa sanduuqyada qalajinta iyo bacaha vacuum ee kor ku xusan, iyo sidoo kale isticmaalka qolalka leh filtarrada hawada daabacahaaga 3D
Waqti ka waqti waa lagama maarmaan bedel sanka extrusion of your 3D printer. Dhibaato aysan haysan kuwa xabagta, inkastoo kuwan kale ay leeyihiin cillado kale sida beddelka ilaha iftiinka. Mararka qaarkood hubinta in boorashku u baahan yahay beddelaad waa mid fudud sida fiirinta muuqaalkeeda, maadaama ay lumin doonto midabkeedii asalka ahaa oo ay muujin doonto wasakh ama dusha sare oo sii xumaanaya.
Waxay ku xirnaan doontaa isticmaalka, inkasta oo haddii isticmaalku uu badan yahay, waxaa lagu talinayaa in la beddelo 3 ama 6 biloodba mar. Marka kaliya PLA la isticmaalo, cimri dhererka qaybahan ayaa badanaa aad u dheer.
Xusuusnow inaad ka heli karto laba nooc ee sanbabada:
Latón: Aad bay u jaban yihiin waxayna ku fiican yihiin fiilooyinka aan xoqin, sida PLA iyo ABS.
birta adag: waa ikhtiyaarka ugu fiican ee xeryahooda kale ee xoqan, dib u dhigista baahida loo qabo in la beddelo sanka.
Beddelida sanbabadani waa sidaas fudud sida in kan hadda jira la furo oo kan cusub lagu maroojiyo madaxa extrusion. Dabcan, waa inay noqdaan kuwo iswaafaqsan.
Had iyo jeer waa fikrad wanaagsan nadiifi sariirta daabacan oo leh maro suuf ah ka dib marka la dhammeeyo daabac kasta. Gudbinta marada ayaa ku filnaan doonta, in kasta oo ay jiri karaan kiisas ay wasakhda ama calaamaduhu ku sii jiri karaan. Xaaladdaas, waxaad isticmaali kartaa suuf ama isbuunyo oo waxaad isticmaali kartaa xoogaa saabuun iyo biyo, adigoo sariirta ka saaraya si aadan u qoysin daabacaadda 3D. Kahor intaadan dib u dhigin sariirta, hubi inay engegan tahay.
Nadiifinta dibadda (guud)
Haddii aad doonayso inaad nadiifiso qaybaha dibadda ee daabacaha, isticmaal a microfiber ama maro suuf ah lint-free. Waxaad u isticmaali kartaa alaabta nadiifinta tan, laakiin iska hubi in haddii ay yihiin polycarbonate ama akril, sida daboolka daabacadaha SLA, LCD iyo DLP, aadan isticmaalin aalkolada ama ammonia, sababtoo ah waxay dhaawici doontaa dusha sare. .
Nadiifinta noocaan ah waa muhiim si looga hortago wasakhdu inay ku ururto biraha ama qaybaha kale oo ay keento kulayl xad dhaaf ah, dhaqdhaqaaq aan sax ahayn, qayb cilladaysan, gariir iyo qaylo yaab leh marka la daabacayo.
Nadiifi wixii aan la arag Waxa kale oo ay muhiim u tahay dayactirka wanaagsan. Qaybaha qarsoon qaarkood, sida looxyada elektarooniga ah, marawaxadaha iyo heatsinks, dekedaha, iwm., waxay ururin karaan xaddi badan oo boodh iyo wasakh ah, taasoo keenta dhibaatooyin caadi ah sida:
Qaboojinta liidata sababtoo ah xaqiiqda ah in taageerayaashu aysan si fiican u soo jeedin sababtoo ah wasakh ku yaal shafka ama xajiyeyaasha. Iyo xataa in waaskada ay xidhmaan.
Kooxo ka abuuri kara dhibaatooyinka wareegga gaaban ee hababka elektaroonigga ah. Waxa kale oo ay ku ururin kartaa qoyaanka alaabta organic ee wasakhda ah waxayna dhaawacdaa looxa elektiroonigga ah.
Dhisidda qalabka iyo matoorada ka hortagaya in si habsami leh loo shaqeeyo.
para iska ilaali, way fududahay in la isticmaalo burush yar, rinji ama buraash iyo nadiifinta dusha sare ee qaybahan. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa faakuum nadiifiye yar iyo xitaa buufinta CO2 si aad u nadiifiso meelo badan oo aan la geli karin.
Haddi ay tahay wasakhda resinka ama sumadaha resinka, biyaha ama nadiifiyaha guriga looma isticmaali karo si looga saaro. Si aad u nadiifiso waxaad isticmaali kartaa a microfiber ama maro suuf ah si loo nadiifiyo saxanka. Oo haddii ay tahay wasakh joogto ah, isticmaal qaar ka mid ah aalkolada isopropyl si aad u qoyso marada.
Cusbooneysii qalabka daabacaha 3D
Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, waa inaad sidoo kale xaqiiji in firmware-ga daabacahaaga 3D uu cusub yahay. Haddii aadan haysan nuqulkii ugu dambeeyay, waa inaad cusboonaysiisaa kan. Soosaarayaal badan oo caan ka ah daabacadaha ayaa caadi ahaan siidaaya sii daynta 6dii biloodba mar ama wax ka badan.
Cusboonaysiintan ayaa laga yaabaa inay keento xoogaa horumar ah sida:
hagaajinta cayayaanka noocyadii hore
Si aad u cusboonaysiiso firmware-ka daabacahaaga 3D, waad u baahan doontaa:
PC-ga laga soo dejiyo oo lagu rakibo cusbooneysiinta firmware-ka.
Soo dejiso oo rakib Arduino bixisaa, haddii ay dhacdo in daabacahaagu 3D ku salaysan yahay looxa Arduino.
Fiilo USB ah oo lagu xidho daabacaha iyo PC-ga.
Gacanta ku hay macluumaadka farsamada ee daabacahaaga 3D (mm ee XYZ steppers iyo extruders, masaafada ugu badan ee dhidibka safarka, heerka quudinta, dardargelinta ugu badan, iwm.).
Faylka la soo dejiyay oo wata nooca firmware-ka cusub. Waxay ku xirnaan doontaa summadaada iyo nooca daabacaha. Waa inaad raadisaa midka saxda ah, laakiin had iyo jeer ka soo dejiso boggaga rasmiga ah, ma aha bogga internetka ee qolo saddexaad.
waa kuwan qaar isku xirnaanta xiisaha software kala duwan si loo cusboonaysiiyo iyo firmware:
Ku celi Firmware
Hagaha ogaanshaha iyo hagaajinta dhibaatooyinka daabacadaha 3D ee caadiga ah
Inkastoo dayactir fiican la sameeyay, mar dhow ama hadhowba nidaamyada waa fashilmaan ama jabaan waana marka ay tahay inaad ogaato sida loo ogaado dhibaatooyinka iyo sida loo hagaajiyo daabacaada 3D. Sidoo kale, waa inaad maskaxda ku haysaa in SLA aanu la mid ahayn DLP, ama noocyada kale ee tignoolajiyada. Mid waliba dhibkiisa ayuu leeyahay. Halkan waxaa lagu daaweeyaa dhibaatooyinka soo noqnoqda, qaar badan oo ka mid ah madbacadaha fiilada ama xabagta ee isticmaalka gudaha, kuwaas oo ah kuwa ugu baahsan.
*FIIRO GAAR AH: Waa in aad dayactirka ku sii waddaa haddii aad run ahaantii garanayso waxaad samaynayso. Tixgeli shuruudaha dammaanadda ee qalabkaaga, maadaama haddii aad fara-geliso aad waayi karto dammaanadda la sheegay. Xusuusnow in aad had iyo jeer damiso oo aad furto daabacaada si aad uga fogaato shoog koronto, sidoo kale hubi in ay qabow tahay si aad uga fogaato gubashada. Dabcan, haddii aad doonayso inaad xakamayso resins, waxaanu kugula talinaynaa inaad xidhato muraayadaha difaaca, maaskarada uumiga suurtogalka ah, iyo galoofyada cinjirka ah.
Waa maxay sababta daabacaadda 3D-ga aanu u daabicin?
Dhibaatadani waa midda ugu badan sababaha suurtagalka ah ayaa, tan iyo markii ay noqon kartaa ku dhawaad ​​wax kasta. Fadlan hubi waxyaabaha soo socda:
Xaqiiji in daabacaha uu ku rakiban yahay oo uu si sax ah ugu xiran yahay.
Hubi in awooda daabacaada ay sax tahay iyo in uu shid yahay.
Ma leedahay fiilo? Mid ka mid ah sababaha ugu macquulsan ayaa badanaa ah fiil la'aanta. Dib u soo deji fiilo cusub oo isku day mar kale.
Haddii uu jiro fiilo, isku day in aad gacanta ku riixdo fiilaha. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirto meel dhib ah oo tuubada ah oo aysan si fiican u dhaafin oo xooggaas ayaa ku filan inuu ka gudbo aaggaas.
Sido kale eeg si aad u aragto in matoorka quudinta fiiladu uu soo jeesanayo iyo in qalabka wax lagu riixo uu rogmanayo.
Fiiri shaashadda daabacaha si aad u aragto haddii ay jiraan macluumaad faa'iido leh ama kood qalad si aad u aragto waxa ay ka dhigan tahay.
Neefku wuxuu u jiraa masaafo aan habboonayn sariirta
Haddi ay biibiile aad ayuu ugu dhow yahay sariirta si uusan u soo dayn balaastiig la soo saaray, sida haddii sanbadhku aad uga fog yahay oo si dhab ah hawada ugu daabaco., waa dhibaato sariirta saxanteeda. Waxaad arki kartaa qaybta dayactirka ee simida si aad u xalliso.
Xuub qaniinay ama qaybo maqan
Madbacadaha ka jaban badanaa waxay isticmaalaan a qalab ilko si loo riixo fiilada hore iyo gadaal, laakiin gears-yadani waxay dhaawac u geysan karaan fiilada marka ay socdaan, iyo xitaa jarista. Kadib:
Hubi inaad ka hubiso qalabka qaniinyada saxda ah, ama hubi in qalabku aanu kala go'in ama aanu go'in.
Nidaamka hagida suufka leh ee dhibaatooyinka leh. Hubi:
Toosiyaha Tooska ah - Matoorku waxa laga yaabaa in uu cilladaysan yahay oo u baahan in la beddelo, ama ilkaha qalabka waa la gashan karaa oo loo baahan karaa in la beddelo. Waxa kale oo laga yaabaa in kamaradu aanu samayn cadaadis ku filan.
Bowden: Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah furayaasha dhuujiya fiilada ayaa aad u dabacsan, ama xajinta fiilaha riixaya si habsami leh uma wareego. Adkee boolalka ama beddel daboolka.
Heerkulka qallafsanaanta ee walxaha la isticmaalo.
Xawaaraha saarista oo aad u sarreeya, isku day inaad yarayso.
Isticmaal biibiile dhexroor ka yar kan lagu habeeyey goobaha daabacaadda.
Madbacaddu waxay ka tagtaa qaybta daabacan ee dhexda
Markaad daabacayso qayb iyo daabacaha 3D joogsada daabacaadda dhexe, iyada oo aan la dhammayn qaybta, waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay:
Fiilkii wuu dhammaaday.
Waxaa jirtay koronto la’aan intii ay socotay howsha daabacaadda.
Tuubbada PTFE ee dhaawacan oo ay tahay in la beddelo.
Fiilaha la qaniinay (fiiri qaybta loo qoondeeyay dhibaatadan).
Kuleylka matoorka. Madbacadaha qaarkood waxay leeyihiin habab joojinaya habka si looga hortago waxyeelo kale.
Cadaadis hoose oo ka soo baxa Isku day inaad fiilada ku tuujiso matoorka, ama in kamaradu ay cadaadis sax ah saarayso.
Faahfaahin yar lama daabaco
Qaybta si fiican ayey u daabacdaa, laakiin Faahfaahinta yar yar ayaa maqan, ma daabacaan. Dhibaatadan waxaa sababi kara:
Dhexroor tuubada oo aad u weyn. Isticmaal mid leh dhexroor yar. Ogsoonow in xalintu inta badan tahay 80% dhexroorka tuubada ugu badnaan.
Hubi in software-ku uu si sax ah u dejiyay dhexroorka sanbabada aad isticmaalayso. Waxaa laga yaabaa inay is-maan-dhaafaan. Xitaa waxaad dejin kartaa biibiile wax yar ka hooseeya kan aad rakibtay si aad u "khiyaan" daabacaha.
Dib u habee qaybta
adhesion liidata ee qaybta
Marka ay tahay gabal kuma dhego sariirta, heerkulka sariirta ayaa laga yaabaa inaysan sax ahayn, ama walxaha sariirta sariirta ama alaabta loo isticmaalo daabacaadda ayaa laga yaabaa inay khaldan yihiin. Sababaha kale ee suurtogalka ah waa:
Nozzle aad uga fog sariirta. Hagaajin dhererka.
Daabacaadda lakabka koowaad si degdeg ah gaabis
Haddii aad leedahay hawo-qaadid lakabka ah, waxa laga yaabaa inay si degdeg ah u qaboojinayso lakabka koowaad oo ay keento arrintan.
Heerkulka sariirtu sax maaha, u deji heerkulka saxda ah ee alaabta aad isticmaalayso.
Waxaad ku daabacanaysaa walxo u baahan sariir kulul oo aadan haysanin sal kulul. (waxaad ku rakibi kartaa mid dibadda ah)
Biriim la'aanta, baalashaas la abuuray marka dusha sare ee sawirka daabacan uu aad u yar yahay. Finankani waxay hagaajiyaan qabsashada. Waxa kale oo aad samayn kartaa raft, ama saldhig daabacan oo ka hooseeya gabalka.
Godadka aan la buuxin ee lakabka u dambeeya
Markaad aragto dalool madhan, sida lakabyo aan si buuxda loo buuxin, laakiin kaliya waxay saamaysaa lakabka ugu dambeeya, sidaas darteed:
Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay extrusion-ka (hoos eeg).
Sababo la xiriira yaraanta lakabyada dhamaadka. Waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho lakabyo badan oo naqshadeyntaada ah.
Dejinta buuxin hoose (%). Goobaha hooseeya ayaa mararka qaarkood loo adeegsadaa si loo badbaadiyo xuubka, laakiin waxay sababtaa dhibaatadan.
Hubi inaadan u isticmaalin qaabka awlallo malabka ah.
Meel bannaan oo aan la buuxin ee lakabyada ama qaybaha dhuuban ee qaybta
Goorma Baco ka maqan derbiyada ama qaybaha khafiifka ah ee qolkaaga, waxay u badan tahay inay sabab u tahay:
Hababka buuxinta faraqa si liidata loo hagaajiyay. Kordhi qiimaha buuxinta si aad u horumariso dhamaadka.
Balladhka wareegga oo aad u yar. Kordhi dhererka wareegyada goobaha daabacahaaga. Qiimaha ku habboon inta badan laminators sida caadiga ah waa in la saaro cabbir la mid ah sida dhexroorka tuubada, tusaale ahaan, haddii aad leedahay 1.75 mm, dhig 1.75.
Matoorka soo saara ayaa aad u kululaaday
Matoorkani wuxuu u shaqeeyaa si adag inta lagu jiro daabacaadda, isagoo si joogto ah u riixaya fiilada hore iyo dibba. Tani waxay ka dhigaysaa mid kulul, mararka qaarkoodna aad ayuu u kululaan karaa, gaar ahaan marka qalabka elektaroonigga ah uusan lahayn habab looga hortago dhibaatadan oo kale.
Qaarkood wadayaasha baabuurta sida caadiga ah waxay leeyihiin nidaam goynta kulaylka si ay u joojiyaan korontada haddii heerkulku aad u sarreeyo. Taasi waxay ka dhigi doontaa matoorada dhidibka X iyo Y inay wareegaan oo dhaqaajiyaan sanbabada ama madaxa extruder, laakiin matoorka wax saaraya gabi ahaanba ma dhaqaaqi doono, si aanu waxba u daabicin.
Hubi ah qaboojiye iyo taageeraha qaybtan, oo u ogolow daqiiqado yar in matoorku qaboojiyo. Madbacadaha qaarkood waxay leeyihiin habab otomaatig ah oo damiya daabacaha si uu u qaboojiyo ugana ilaaliyo burbur kale.
Warping ama qallafsanaan: sababaha iyo xalalka
Dhibaatadan si fudud ayaa loo aqoonsan karaa, maadaama ay tahay marka shaxanka uu u janjeero inuu qalloocdo iyo waxay leeyihiin geeso qalloocan ama qalloocan daabacaadda ka dib. Dhibaatadani waxay badanaa sabab u tahay kala duwanaanshaha heerkulka inta lagu jiro habka wax soo saarka ee ay keento heerkulka khaldan, ama nidaamka kuleylka.
Waxay caadi ahaan ku dhacdaa marar badan ABS, inkastoo la sixi karo adoo isticmaalaya ABS+. Haddii aad isticmaalayso ABS-ga caadiga ah, waa inaad tixgelisaa inaad isticmaasho qalab hagaajin ah sida 3DLac, oo aad sidoo kale ka abuurto Brim agagaarka gabal, nooca baalasha taageerada ee hadhow laga saari doono.
Sidoo kale iska hubi inaysan jirin qabyo qabow qolka dhexdiisa, sababtoo ah tani waxay keeni kartaa in fiilku uu si dhakhso ah u adkeysto oo walxaha ka soo baxaan sariirta.
Dayactirka 3D daabacaha oo leh xadhig ama jajab
El jeexjeexaya ama xargahaas dhibsada Xadhkaha fiilooyinka ku dheggan shaxanka waa dhibaato kale oo caadi ah. Caadi ahaan waxaa sabab u ah hagaajinta hagaajinta oo liidata, heerkulka, dib u noqoshada ku filan, ama nooca fiilaha. Haddii aad waligaa isticmaashay qoriga koollada kulul, waxa hubaal ah in aad dareentay in xabagtani ay noqdaan kuwo soo noqnoqda, oo wax la mid ahi ay ka dhacaan madbacadaha 3D.
para xallin dhibaatadan, Hubi in dib u celintu ay firfircoon tahay, in masaafada dib u celinta ay sax tahay iyo in xawaaraha dib u laabashadu uu sidoo kale sax yahay. Qalabka sida ABS iyo PLA, xawaaraha dib u noqoshada ee 40-60mm/s, iyo masaafada 0.5-1mm ee soo saarista tooska ah, badanaa waa wanaagsan tahay. Marka la eego nooca extruders ee Bowden, ka dibna waa in lagu dhimaa xawaaraha 30-50 mm / s iyo masaafada 2 mm. Ma jiro sharci sax ah, markaa waa inaad isku daydaa ilaa aad saxdo.
Hubi taas xawaaraha iyo heerkulka ee isku dhafka ah waa ku habboon walxaha in aad isticmaalayso, iyo in fiilooyinku aanay qoyanayn. Tani waxay sidoo kale keeni kartaa dhibaatooyinkan oo kale, gaar ahaan marka heerkulku aad u sarreeyo.
Dhanka kale, waxay sidoo kale noqon kartaa sabab u ah dhaqdhaqaaqa madaxa aad u weyn. Madbacadaha qaarkood waxay leeyihiin astaamo ay ka mid yihiin Iska ilaali Wareegyada Gudbinta si looga fogaado in meelaha bannaan laga gudbo oo laga tago duntan, taas oo sidoo kale ah ikhtiyaar haddii la awoodo.
Neefka ayaa xidhan
ka Neefsashadu waxay u muuqdaan inay xirmaan, waana mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xanaaqa badan uguna soo noqnoqda ee FDM nooca 3D daabacayaasha. Badanaa waxaa lagu dareemaa dhawaaq yaab leh oo ku jira madaxa extrusion oo si lama filaan ah fiilku u joogsado ka soo baxaya sanka.
ka sababaha iyo xalalka suurtagalka ah Waxay yihiin:
Tayada fiilooyinka liidata, markaa waa inaad isku daydaa fiilo kale oo tayo fiican leh.
Heerkulka qallafsanaanta ee khaldan. Hubi in kulayliyaha hotend uu meesha ku jiro iyo in heerkulka dejintu uu sax yahay.
Qaybta fiilada cilladaysan. Soo saar fiilada, gooy qiyaastii 20-30cm si aad meesha uga saarto qaybta dhibaatada, oo dib u soo celi. Waxa kale oo ay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in la mariyo irbad ama caarada daloolka si loo nadiifiyo sanka.
Haddii aad ka shaqayso deegaan boodh badan leh, sida bakhaar warshadeed, aqoon-is-weydaarsi, iwm, waa inaad isticmaashaa Saliida, yacni, isbuunyo yar oo saliid ah si aad u nadiifiso fiilada ka hor inta aanay gaadhin meesha laga saarayo.
Kala guurista lakabka ama guuritaanka lakabka
Caadiyan waxa sabab u ah a barokaca mid ka mid ah lakabyada on dhidibka X ama Y. Sababaha suurtagalka ah iyo xalalka dhibaatadan waa:
Hotend-ka aad buu u socdaa oo matoorku waxaa ka maqan tillaabooyin. Hoos u dhig
Halbeegyada dardargelinta ee khaldan. Haddii aad faragelisay qiyamka dardargelinta firmware-ka, waxa laga yaabaa inaad gashay kuwa khaldan. Hagaajinta tani waxay noqon kartaa xoogaa ka dhib badan, waana inaad ka hubisaa alaab-qeybiyahaaga.
Dhibaatada makaanikada ama elektiroonigga ah, sida dhibaatooyinka xiisadda suumanka ilka leh, ama dhibaatooyinka darawallada kontoroolka matoorrada stepper. Haddii aad dhawaan bedeshay darawallada oo tan iyo markaas ay duubitaanku bilaabatay, waxaa laga yaabaa inaadan dooran mA saxda ah.
Markaad aragto wasakh caag ah ama smears Dusha sare ee shay, sida haddii qaybo yaryar ay ku dheggan yihiin gabalka, waxay noqon kartaa laba sababood:
Heerkulka sare-u-qaadista xad-dhaafka ah ee sababa daadinta ama dareeraha qaybta oo ka taga kuwan xad-dhaafka ah. U deji heerkulka ku habboon walxaha la isticmaalay.
Meesha khaldan ee dib u noqoshada fiilaha
Caag xad-dhaaf ah oo qaab dhibic ah
Markaad aragto in gabalku leeyahay qaar balaastig xad-dhaaf ah oo dusha sare ah iyo kuwan xad-dhaafka ah ayaa ah qaab dhibco ah (smudges waxay leeyihiin qaabab badan oo fowdo ah), waxaad u baahan doontaa inaad hubiso walxaha extruder ama hotend, maadaama ay u badan tahay inay dabacsan yihiin:
Duubka dunta oo liidata (qaar ka mid ah aluminium ama naxaasta nozzles ma aqbali doonaan adkeynta xad-dhaafka ah ama ka-saarista walxo jilicsan awgeed).
Usha si fiican looma adkayn.
nabarrada dusha ka saaran
Waxay u badan tahay inaad aragto calaamado sida xagashada ama jeexjeexyada dusha shayga. Xaaladdan oo kale, waxay u badan tahay in sanka ama sanka uu xoqayo sababtoo ah:
Homming Z si liidata ayaa loo hagaajiyay, iyo biibiile aad buu u dhow yahay.
Xad-dhaaf (eeg qaybaha soo socda).
Marka ay ka soo bixidu caadi ka hooseyso, ma extrude ku filan fiilo, dhibaato ayaa ka dhalata qaybaha, iyada oo aan si fiican loo buuxin wareegyada ama waxay la soo baxaan meelo bannaan oo u dhexeeya lakabyada iyo cilladaha. Sababaha dhibaatadaan iyo xalkeeda waa.
Dhexroorka fiilaha khaldan. Hubi inaad u isticmaalayso fiilaha saxda ah ee daabacaada (1.75mm, 2.85mm, 3mm,…).
Waxay kordhisaa halbeegga-badane-badane extruder-ka Tani waxay maamushaa inay beddesho qaddarka walxaha la soo saaray. Tusaale ahaan, haddii aad ka baxdo qiimaha 1 ilaa 1.05, waxaad soo saari doontaa 5% dheeraad ah. PLA 0.9 ayaa lagula talinayaa, ABS 1.0.
Una extrusion xad dhaaf ah waxay soo saartaa fiilo aad u badan, taasoo keenaysa in lakabka uu sidoo kale leeyahay dhibaatooyin oo uu keeno natiijooyin xun guud ahaan. Waxay u badan tahay inaad aragto in dusha sare ee gabalku leeyahay baco dheeraad ah. Sababuhu waxay la mid noqon karaan kuwa hoos-u-dhaca, laakiin qiimaha cabbirka ee ka soo horjeeda (eeg qaybta hore oo hagaajiso xuduudaha dhinaca dambe, taas oo ah, hoos u dhigista qiimaha halkii aad kor u qaadi lahayd).
Nozzle ka horrayn
Qaar ka mid ah kuwa extruders ayaa dhibaato kala kulma caag ka daadanaya marka lagu hayo heerkul sare, maadaama caaga la dhalaaliyay ee ku harta tubooyinka iyo sanka ay u janjeerto inay soo daato. Tani waxay u baahan doontaa hoos u dhigista ama soo saarida sanbabada si looga hortago in xad-dhaafka ah waxyeello u geysto daabacaadda. Xalka fudud ayaa ah in si fiican loo nadiifiyo sanbabada ka hor inta aan la daabicin si looga saaro wixii haraaga ah ee ku dhex jira.
Waxaa jira madbacadaha qaarkood oo leh barnaamijyada ama hawlaha gaar u ah. Kuwo kale waxay doortaan inay isku dayaan inay daabacaan goobaabin qaybta si ay uga takhalusaan dhammaan caagadaasi.
Haddaad aragto in gabalku leeyahay jeexjeexyada dhinacyada, iyo in lagu soo celiyo dhammaan dhismaha shayga oo dhan, ka dibna waxay noqon kartaa dabacsanaan ama dhaqdhaqaaq toosan oo aan toos ahayn dhidibka Z. Waxaad hubin kartaa heerka dhidibka ama ulaha, hubi inay toosan yihiin, taas Waxay ku foogan yihiin matoorada, in looska iyo boolasha ay si fiican u go'an yihiin.
Kuleyl ka badan qaybaha daabacan
Marka qaybta daabacan ay leedahay faahfaahin kuwaas oo ah aad bay u kululaadaan oo balaastiigu way dhalaalaan oo way qallafsadaan, ka dibna waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay:
Qaboojinta lakabka oo aan ku filnayn. Kor u qaad qaboojinta ama ku dar nidaam qaboojin gaar ah.
Heerkulka oo aad u sarreeya. U deji heerkulka ka saarista saxda ah ee alaabta aad isticmaalayso.
Si degdeg ah ayuu u daabacaa Hoos u dhig xawaaraha daabacaadda.
Haddii kuwan sare aanu midna shaqayn, waxaad isku dayi kartaa inaad hal mar daabacdo qaybo badan. Tani waxay u oggolaan doontaa waqti dheeraad ah lakabyada inay qaboojiyaan.
Delamination ee daaweynta resin
La deminta marka ay ku dhacdo daabacaha 3D resin waxaa sabab u ah sababo aan ka ahayn delamination ee daabacayaasha filaha. Dhibaatada noocaan ah waxay keentaa lakabyo la daweeyay inay kala tagaan, ama hadhaaga resin adag oo sabaynaya haanta xabagta. Marka la eego sababaha ugu badan ee soo noqnoqda:
Dhibaatooyinka dhinaca hanuuninta ama abaabulka qaabka ama dhibaatooyinka taageerooyinka.
Daabacaadda ayaa hakad ku jirtay in ka badan hal saac.
Taangiga xabagta hore ee u baahan in la beddelo.
Goobta dhismuhu waa dabacsan.
Sagxadaha daawaynta indhaha ayaa wasakhoobay oo waa in la nadiifiyaa ama la beddelaa.
Daabacaadda faakuumka daabacaha resinka
Markaad aragto godad madhan Qaybaha daabacaadda weji-hoos u socda qaarkood, waxa ay u sabab noqon kartaa saamaynta koob nuugista, hawo dabinaysa inta lagu jiro daabacaadda oo keenaysa in daloolkaas aan laga buuxin resin. Sidoo kale, waxay kaga tagi kartaa taangiga taangiga raadadka resin adag, sidaa awgeed waxa lagu talinayaa in la sifeeyo xabagta.
para dhibaatadan sax:
Maqnaanshaha godadka dheecaanka ee moodooyinka 3D ee qaybaha godan ama convex. Ku qod godad naqshadda 3D si ay u jirto biyo-baxa inta lagu jiro daabacaadda.
Dhibaatooyinka hanuuninta model. Isku day inaad ka ilaaliso daloolka inuu hoos u dhaco adiga oo ka fogaanaya buuxinta hawo.
sifada aan la horumarin
Waa dhibaato kale oo xoogaa la yaab leh, laakiin waxay ku dhacdaa qaar ka mid ah daabacayaasha 3D resin. waa la arki karaa bannaan ee qaybaha gudaha ama qaar ka mid ah sifooyinka aan la horumarin., badanaa leh qaabab dalool, meelo qallafsan, geeso fiiqan, ama lakabka resin la daweeyay oo ku yaal xagga hoose ee haanta xabagta.
kaliya dhacdaa ku daabacayaasha SLA marka qayb ka mid ah qaybtu ay ku dhegganaato xagga hoose ee haanta resinka oo ay qayb ka xidho laysarka daawaynaya ama isha iftiinka, kana ilaalinaysa inay gaadho lakabka xiga. Xalkuna wuxuu noqon karaa:
Burbur ama dhaawac soo gaadhay haanta xabagta. Waa inaan aragnaa haddii ay yihiin hadhaagii laga saari karo iyadoo la sifeynayo xabagta iyo nadiifinta taangiga ama haddii ay dhaawac yihiin oo kugu qasbaya inaad bedesho haanta.
Waxa kale oo ay sabab u noqon kartaa isticmaalka resins Standard daruuro leh. Isku day nooc kale oo resin ah kiiskan.
Iska hubi dusha sare ee indhaha, in ayan wasakh iyo wasakh ahayn. Tani waxay sidoo kale keeni kartaa dhibaatadan.
Waxay u badan tahay inay sidoo kale sabab u tahay jihaynta ama dhibaatada taageerada qaabka 3D. Waa in dib loo eego naqshadda CAD.
Godad ama goyn
marka la mahadiyo madaxa (sida tunnelyada yaryar ee dhex mara qaybta) ama goyn gobollada qaarkood, waxay noqon kartaa sababo dhowr ah:
Qashin ku yaal dusha haanta xabagta ama daaqada indhaha, ama sagxadaha kale ee indhaha. Tani waxay kugu qasbi doontaa inaad nadiifiso qaybta ay saamaysay si aad u xalliso dhibaatada.
Xaaqid ama cillad la'aan ku taal dusha sare ee haanta xabagta ama curiyaha indhaha. Tani waxay lagama maarmaan ka dhigaysaa in la beddelo cunsurka la xoqay.
Dildilaaca ayaa ka muuqda lakabka koowaad
Haddii aad qadarin nooc ka mid ah dildilaaca furan ama jeexjeexa lakabka kowaad, sida haddii xariiq kasta oo daabacan uu ka go'o xariiqda ku xigta ama ka go'o saldhigga:
Dhererka lakabka koowaad aad buu u sarreeyaa. Hagaajin goobta wax lagu dhisayo.
Heerkulka lakabka koowaad aad buu u hooseeyaa. U deji heerkulka saxda ah ee alaabta aad isticmaalayso.
Haddii aanay midna kuwa sare ku jirin, kordhi ballaca xariiqda lakabka kowaad.
El qaawan waa cilad ku jirta daabacadaha xabagta. Waxay sameeyaan nooc ka mid ah miisaaman ama muuqaallo toosan oo ka soo baxa dusha qaybta. Qaar baa ka go'i kara gabalka inta lagu jiro habka daabacaadda, qaar kalena way ku sii dheggan yihiin. Kuwa jaban waxay ku dul sabeyn karaan haanta xabagta oo ay xannibi karaan soo-gaadhista, taasoo keenaysa in lakabyada kale ay fashilmaan. Xalkaagu wuxuu mari doonaa:
Xabashidu way dhacday
Burbur, burbur, ama daruuro ku jira haanta xabagta. Hubi/badali haanta iyo shaandhaynta resinka.
Qulqulka xabagta ee xaddidan jihaynta liidata ee moodeelka ama taageerooyinka aad cufan.
qallafsanaan ama finan
Waxay u badan tahay inaad ku aragto qaybo dhammaatay oogada oogada, sida laalaabyada, gooyn aan sinnayn, kuuskuus hal ama dhowr dhinac oo gabal ah, iwm. Dhibaatadan daabacayaasha resinka waxaa u sabab ah:
Meelaha indhaha ee wasakhaysan si loo nadiifiyo.
Cadaadiska xad dhaafka ah
Erayga isku-buufinta xad-dhaafka ah wuxuu qeexayaa cillad ka timi qaybo daabacan. Waxay dhacdaa marka meesha bannaan ee u dhaxaysa dhismaha iyo lakabka laastikada, ama filimka dabacsan, ee haanta resin la yareeyo oo ay keento lakabyada hore aad bay u dhuuban yihiin, si ay u ekaan doonaan la tumay. Waxa kale oo ay ka dhigaysaa mid aad u adag in la kala saaro gabalka salka, ama ka tago saldhigyo fidsan iyo cidhifyo ka gaaban kuwa caadiga ah. Si taas loo hagaajiyo, hubi meelaynta xaashida.
La'aanta adhesion ee daabacaadda 3D xabagta
Marka markaa aragtiyaha ayaa qayb ahaan ama gebi ahaanba laga soocay saldhigga daabacaaddu waxay muujinaysaa inay jirto dhibaato adhesion. Wax ay sababi karaan:
Saxan la daweeyay oo ku yaal taangiga hoose (la'aanta adhesion buuxa) si meesha looga saaro.
Daabac la'aan sal ku habboon ama dusha sare.
Lakabka ugu horreeya ee xajintu aad buu u yar yahay si uu u taageero miisaanka qaybta.
Burbur, burbur, ama daruuro ku jira haanta xabagta. Sifee, nadiifi, ama beddel resinka.
Meel bannaan oo xad dhaaf ah oo u dhaxaysa saldhigga daabacaadda iyo lakabka laastikada ama filimka laastikada ee haanta resin.
Silhouettes ku yaal saldhigga daabacaadda ( daabacaha 3D xabagta)
Waxay u badan tahay in mararka qaarkood aad la kulantay silhouettes qaybo ka mid ah ku daabacan saldhigga daabacaadda. Lakab ama nasasho leh qaab ku dheggan saldhigga iyo in qaybta inteeda kale aysan daabacin ama laga yaabo inay ka soo baxeen oo ay ku jiraan haanta resin. Xaaladahan, sababaha caadiga ah waa:
Dusha sare ee indhaha oo ay ku wasakhoobeen nooc ka mid ah wasakhda, qashinka, ama boodhka. Maskaxda ku hay in inkasta oo qaybahani ay xannibi karaan iftiinka, lakabyada ugu horreeya waxay badanaa leeyihiin habka daaweynta dheer, sidaas darteed waxaa suurtagal ah in lakabyadan ugu horreeya ay sameeyaan oo aan ahayn qaybta inteeda kale.
Waxa kale oo ay noqon kartaa burburka, burburka ama qaska ku jira haanta xabagta.
Sidoo kale hubi xaalada daaqada akril ee haanta xabagta.
Iyo muraayadda ugu weyn.
Qalabkii simida ayaa gaadhay xadkiisii
Waxay u badan tahay in marka la isku dayayo in la simo saldhigga waxaad ogaan doontaa in furka hagaajinta ayaa gaadhay xadkiisii mid ka mid ah jihooyinkiisa safarka. Xaaladdaas, waxaad dib u soo kaban kartaa qaar ka mid ah safarka adiga oo furaya furka xiriirka la leh dhammaadka dhidibka Z. Ka taxaddar saldhigga haddii uu ka samaysan yahay dhalo, maadaama uu sanbadhku si lama filaan ah u dhici karo oo jebin karo.
Turjumaan koodka qaladka daabacaha 3D
Hadaad aragto a code qalad shaashadda LCD-ga daabacaha lagama yaabo inuu bixiyo xog ku filan oo lagu garto dhibaatada. Sidoo kale, samayn kasta iyo nooc kastaa waxay yeelan karaan kood khalad oo kala duwan. Sidaa darteed, si aad u turjunto koodka waa inaad akhrido buug-gacmeedka modelkaaga qaybta cilad-bixinta.
Daabacaadda 3D Hagaha Bilowga ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Daabacaadda 3D » Qaybaha firaaqada iyo dayactirka daabacaha 3D
Arduino Timer: ku ciyaar wakhtiga mashaariicdaada
Filaments daabacayaasha 3D iyo resin